Guddiga gurmadka abaaraha ee Jaamacadda Muqdish ayaa maanta oo Talaado ah gargaar kala duwan u qaybisay 500 oo qoys oo ka mid ah dadkii kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay gobollada Koonfurta dalka Soomaaliya. Gargaarkan oo isugu jiray caano, daawo, dhar iyo timir ayaa waxaa loo qaybiyay dad ku jira kaam ku yaalla degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Gargaarkan ayaa qayb ka noqonaya gargaarro uu guddigan...
Jaaliyadda Soomaliyeed ee SALAALA ee Saldanada Cumaan oo Deeqdii ugu Balaarneyd soo gaarsiyey Dadka Abaaraha Saameeyeen
Jaaliyadda Soomaaliyeed SALAALA ee ku Nool Dalka Saldanada Cummaan ayaa soo gaarsiiyeen Deeq Lacageed iyo Raashiin walaalhooda ay waxyeeleeyeen Abaaraha ka jira Dalka Soomaaliya. Deeqdaan ay soo Direen Jaaliyada Salaala ayaa waxaa loo soo wakiishay Shiikh Cabdi wali Muuse in uu gaarsiiyo Dadka Dhibaateeysan looguna iibiyo Raashiin . Ku talagalka deeqda ayaa wuxuu ahaa in la gaarsiiyo in ka badan kun...
Sida aan ogsoon nahay tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya waxaa soo ifbaxay kaalimo basdan oo u baahday in wax laga qabto kuwaas oo ay dowladu iyada dadka ka haqab tiri jirtay sida adeegyada bulshada dhinac walba haday ahaan lahayd caafimaad,waxbarasho IWM, hadaba arintan waxaa u istaagay hay’ado badan iyo ururo samafal kuwaas oo qaarkoodna ay yihiin dowli qaarna wadani ayaa...
Dhawaan ayay ahayd markii xero ay Dowladdu u sameysay dadka ka soo barakacay abaaraha kuna taalay agagaarka Xoosh ee degmada Dharkeynlay ay ka dhacdo xanuun badan oo maalmihii la soo dhaafey Shacabku hadal hayaan kadib markii dad gaaraya 12 qofood lagu dilay kuwaas oo ahaa dadkii ku jiray xeradasi, waxaana falkaan gaystay Ciidamada ka tirsan Dowladda Federaalka oo watay Gawaari Tikniko ah. Falkaan...
Deeq ka timid gobolka Minnesota ee dalka Mareykanak oo loo qaybiyay barakacayaaha Abaaraha Deeq ay soo ururiyeen qaar ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa maanta loo qaybiyay qaar ka mid ah barakacayaasha abaaraha oo ku jira kaam ku yaalla agagaarka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Deeqdan oo ahayd lacag caddaana ayaa waxaa loosoo wakiishay Suhuur Xasan Axmed oo...